ခုလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေချိန် မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုး ထားသင့်သလား…? – Shwe Likes
ခုလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေချိန် မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုး ထားသင့်သလား…?
၁။ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးဟာ တုပ်ကွေးကို ကာကွယ် တဲ့ဆေးပါ။ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်တဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့က ရောပြီး ကိုဗစ်ကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သလို ပြောကြတာတွေရှိ ပါတယ် ။ ကိုဗစ် အတွက် ကာကွယ်ဆေး မရှိပါ။ တုပ်ကွေးကိုတော့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖျားနာတဲ့အခါ ကိုဗစ်မှန်း သိရတာပေါ့ ဆိုတာမျိုးလို ပြောကြ တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဖျားတဲ့ အခါတိုင်း ကိုဗစ်ပဲ ရှိတာ မဟုတ် ပါဘူး ။ တခြားအကြောင်း အရာတွေလည်း ရှိနိုင်သေးလို့ ကိုဗစ်မှန်းသေချာ သိဖို့က swab ယူစစ်ဆေးမှု လုပ် ကို လုပ်ရမှာ ပါပဲ။
ရေလမ်း ပန်းလမ်း ဆီမီးလမ်း ဖြင့် ပဌာန်း ပူဇော်ခြင်း(ရေလမ်း ပန်းလမ်း ဆီမီးလမ်း ပူဇော်နည်း တောင်းထားသူများ အတွက်)
သမီး သိခဲ့ပါပြီ အဖေ…သုံးမိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်